I-Golfer JoAnne Carner: Iprofayili yeLPGA Legend
I-JoAnne Carner yayisisigxina kwigalufa yabasetyhini ngee-1970 nakwe-1980, kodwa wayedume kakuhle ngaphambili kwaye emva kwexesha elide, naye.
Umhla wokuzalwa: ngo- Epreli 4, 1949
Indawo yokuzalwa: Kirkland, Washington
Isiteketiso: Umama omkhulu kwiLPGA Tour. Ngaphambi kokutshata, xa igama lakhe linguJoAnne Gunderson, wayebizwa ngokuba yi "Great Gundy."
• I-US Women's Open Open: 1971, 1976
• I-Amateur yase-US yabesifazane: 1957, 1960, 1962, 1966, 1968
• I-LPGA yemali ye-Tour, 1974, 1982, 1983
• Vare Trophy winner (i-average score score), 1974, 1975, 1981, 1982, 1983
• Umdlali we-LPGA wokutyelela unyaka, 1974, 1981, 1982
• Ilungu leqela le-US Curtis Cup, 1958, 1960, 1962, 1964
• I-Captain, iqela le-US Solheim Cup, ngo-1994
• I-JoAnne Carner yedwa umfazi ophumelele ukuphumelela i-USGA Girls Junior Amateur, i- US Women's Amateur kunye ne- US Women's Opening titles.
• Njengomtsalane ngo-1969, iCarner yanqoba i-LPGA Burdine's Invitational. Omnye umculi akazange anqobe umcimbi we-LPGA kude kube ngo-2012.
• I-Carner ithatha ukwahlula kokuba ngumdlali omdala wokunquma kwiLPGA Tour. Wayeneminyaka engama-64 kunye neentsuku ezingama-26 xa wayinqumle kwi-2004 LPGA Chik-fil-A Charity Championship.
I-JoAnne Carner iqulunqe enye yeengxelo eziphambili ze-amateur zaliphi na i-golfer ibhinqa. Emva koko wabhala enye yeengxelo ezigqwesileyo zeengcali.
Kwaye iCarner yayisabhala iirekhodi kakuhle kuma-60s.
I-Carner yaqala ukufumana isaziso sikazwelonke ngo-1956, xa-njengoJoAnne Gunderson - wayinqobe iqela lobungqina be-USGA Girls Junior kwaye, kamva, walahleka kumdlalo wecatshulwa kwi- US Women's Amateur . Ngomnyaka olandelayo wawuthatha ngowokuqala kwezinto eza kuba ziintlanu zoLutsha lwaseMelika.
I-Carner yadlala kwii-LPGA zeNdwendwe kwiiNdwendwe apha naphambili njengoko wayephethe indawo yesebe yabasetyhini. Iziganeko zakhe ezigqityiweyo ezigqityiweyo kwiziganeko zeprogram zagqitywa ngo-1969 xa ephumelele ukumenywa kwe-LPGA Burdine's Invitational.
Unyaka olandelayo, ekupheleni kweminyaka engama-30, iCarner yagqitywa ngokutsha. Yaye yaqhubeka iphumelele ekuphumeleleni. Wathola ukunqoba kwakhe kokuqala kwe- US Women's Open ngo-1971. Wayephumelele iminyaka emibili xa, ngo-1974, uCarner wayethetha ukunqoba kweetandathu ezintandathu kwaye wahola uluhlu lwemali okokuqala.
Omnye umxholo we-US Women's Open Uvule ngo-1976, kwi-18-pit hole echasene noSandra Palmer, kodwa yayiza kuba yinto yokugqibela yokuphumelela kwiCarner. Wafika ngokuphindaphindiweyo amaxesha amaninzi, nangona emva kokugqithisa kwakhe ukulahlekelwa i-18-hole hole- Laura Davies ngo-1987 US Women's Open, kunye nokudibanisa okwesibini kwi- LPGA ye- 1992 ye- LPGA Championship .
Iminyaka eyona nto ivelisa ngayo i-Carner ekuqaleni kwee-1980, xa iphumelele amaTrip Trophies amathathu, izihloko ezimbini zemali kunye namabhaso amabini e-nyaka-mali.
I-LPGA yokugqibela yokutyelela i-LPGA yayiku-1985. Kodwa waqhubeka edlala ityelelo. Ngo-1999, eneminyaka engama-60 kwaye edlala i- du Maurier Classic , waba ngumdlali omdala wokunquma kwi-LPGA enkulu. Ngo-2004, xa eneminyaka engama-64 ubudala, waba ngumdala kunabo bonke ukuba enze isigxina kwi-LPGA.
Iimpawu zokuhamba ezikhulayo zihambelana nobuntu obukhulayo. Wayetshaya ngelixa edlala kwaye wuleza ngehlaya kwizwi lakhe. Iqonga lafumana udumo emva kokuba uhambo lwakhe lokuhamba luye lancipha njengomqeqeshi ophezulu wegalufu kubafazi.
I-JoAnne Carner yachithwa kwiHlabathi yeHlabathi yeHlabathi yeGama ngo-1985.
URory McIlroy: I-Biography ye-Ireland Best Golfer
Ukuchaza Ixesha leGalofu 'ngokusebenzisa iGreen'
Incwadi ye-Odyssey IX - Nekuia, apho i-Odysseus iThetha khona kuma-Ghosts
Ukufaka isicelo kwimisebenzi kaRhulumente kaRhulumente
Izinyathelo ezilula zokuKhusela iiTire eziThabileyo
Ukubulawa Kwamahlathi eKatyn
Iinkonzo zeNkolo kunye neeNkokeli zeNkolo
Huáscar kunye neAtahualpa Inca Civil War